Sirdoonka Ingiriiska Oo Xabsiga Dhigay Maxkamadna Soo Taagay Rag Ku Eedaysan In Ay Khaarijinayeen Theresa May – Heemaal News Network
Labo ruux ayaa galinka dambe ee maanta ka soo muuqan doona maxkamadda Westminster Magistrates iyaga oo loo haysto in ay maleegayeen sidii ay ku dili lahaayeen ra’iisulwasaraaha Britain Theresa May.
warbaahinta ayaa ogaatay in eedaymahaas ay qayb ka yihiin qorshe ay bambaanooyin oogu weerari lahaayeen albaabada laga galo xafiiska ra’uusul wasaaraha iyo in ay markaas ka dib mindi ku weeraraan ra’iisulwasaaraha.
Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dib u eegid ammaan lagu sameeyay weerarkii bandhig faneedka Manchester lagu sheegay in ay “arrin loo qaateen ah ay noqon karto” in la dhoho waa laga hortagi karay weerarkaas.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Jarmalka ayaa ku martigalinaya dhigiisa dalka Turkiga saacadaha soo socda wadahadalo uu la yeesho oo lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka sii xumaanayay ee u dhaxeeyya labada dal. Wasiirka arrimaha dibedda […]
Madaxweynihii Hore Ee Gobolka Catalonia Oo Maanta Lagu Xidhay Dalka Jarmalka.
March 25, 2018 Caalamka
Ciidamada Jarmalka ayaa maanta xabsiga u taxaabay madaxwaynihii hore ee Gobolka Catalonia, Carles Puigdemont, ayaa sida uu xaqiijiyay qareenkiisa. Jaume Alonso-Cuevillas ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in maanta la qabtay hogaamiyaha waqti uu ka […]
Dhaqaatiirta Jarmalka Oo ka Horyimid Qorshe Dowladda la Damacsantahay Muhaajiriinta.
Dhaqaatiirta dalka Jarmalka ayaa kasoo horjeedsaday qorshe dowladda ay ku damacsantahay in ay ku baarto dadka muhaajiriinta ah ee dalkaas galay si loo ogaado da’dooda rasmiga ah. Siyaasiyiinta ayaa sheegay in ay jiraan dad badan […]